ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်း - Ningbo Beilun Daqi Hongxiang မှို Co. , Ltd မှ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဒီဇိုင်းကိုအထူးပြုနှင့်မှို & သေဆုံး-casting တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း & ဆေးထိုးပလပ်စတစ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုထုတ်လုပ်။ ဒါဟာ ISO9001 လွန်ပြီ: 2015 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးကိုစနစ်ကစစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်း။
ကျနော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်နည်းပညာကိုဒေတာများကိုဒီဇိုင်းအဖွဲ့အထူးပြုပါပြီ။ CAD, UG နှင့် Pro / E ကို: ဂျပန် JSCAST-VER13, ဂျာမနီကျောက် Gates system ကိုဒီဇိုင်းနှင့် CAE, သည် CAM နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 2D / 3D ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသည်,: အရှိဆုံးအဆင့်မြင့်အပြေးသမားခြင်း simulation ဆော့ဖျဝဲရှိပါသည်။
အဆိုပါအဆင့်မြင့်ကိရိယာများ: မြန်နှုန်းမြင့် CNC စက်, CNC ဖွဲ့စည်းရန်စက်, EDM, ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းစက်, စက် (200T) အစက်စက်ကျခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်သေဆုံး, တွင်ခုံ, စက်ကြိတ်, CMM, ပရိုဂျက်တာ, မှိုပစ္စည်း microstructure Analyzer, ပစ္စည်း detector, ခိုင်မာသောစမ်းသပ်ကိရိယာ spectrograph, စသည်တို့ကို
"ဖောက်သည်, အရည်အသွေးနှင့်ပထမဦးဆုံးရိုးသားမှု" ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိယာမဖြစ်ပါသည်။
"အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်း, ဝတ္ထုဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မားတိ, အရည်အသွေးပစ္စည်းများ, ရှည်လျားတသက်တာတိုပေးပို့အချိန်" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် features တွေဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကအမြဲအရည်အသွေးမြင့်နှင့်အတူဂရုတစိုက်တိုင်းအသေးစိတ်အောင်, မှိုနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုနှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန် Win-Win မှအတူတကွထက်မြက်ဖန်တီးဒါဖောက်သည်ဈေးကွက်ထဲမှာပိုကောင်းတဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်ကူညီရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နေ!
အမှန်တရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှကြိုဆို, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မျက်စိမှတဆင့်သက်သေပြရပါမည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်မည်! သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုစိတ်ဝင်စားပါက, တှနျ့ဆုတျနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့မခံစားရဘူးပါ။